ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဝန်ကြီးဦးစိုးထက်နှင့် အင်တာဗျူး - Khonumthung Media Group
You are at:Home»Headline»ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဝန်ကြီးဦးစိုးထက်နှင့် အင်တာဗျူး
ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဝန်ကြီးဦးစိုးထက်နှင့် အင်တာဗျူး
By admin on	 November 20, 2020 Headline
By Benezer – ခငျြးပွညျနယျတောငျပိုငျး ပလကျဝမွို့နယျမှာ ရက်ခိုငျ့တပျတျော (AA) တပျဖှဲ့ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှဈက ခွကေုပျယူ လှုပျရှားလာတဲ့နောကျပိုငျးကစပွီး တပျမတျောနဲ့ ထိပျတိုကျတှဆေုံ့ ရငျဆိုငျတိုကျပှဲတှဖွေဈလာတာကွောငျ့ ပလကျဝမွို့နယျဟာ စဈတလငျးနယျမွဖွေဈခဲ့ရသလို တိုကျပှဲကွောငျ့ အပဈမဲ့ပွညျသူအမွောကျအမြား နရေပျစှနျခှာထှကျပွေးခဲ့ကွရပါတယျ။
တပျမတျောနဲ့ AA တပျဖှဲ့ဟာ ၂၀၂၀ နှဈဆနျးပိုငျးကစလို့ ယခငျကထကျ တိုကျပှဲတှေ ပိုမိုပွငျးထနျလာတာကွောငျ့ ပလကျဝမျွို့နယျနဲ့ ရခိုငျပွညျနယျမှာ အပဈမဲပွညျသူ သိနျးနဲ့ခြီ စဈဘေးဒုက်ခသညျဘဝ ရောကျခဲ့ရပါတယျ။ ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့နယျမှာဆိုရငျလညျး စဈဘေးရှောငျပွညျသူ တဈသောငျးကြျောဟာ စဈဘေးတိမျရှောငျနကွေရဆဲဖွဈပါတယျ။
ပလကျဝမွို့နယျမှာ စဈရေးပဋိပက်ခတှေ ပိုပွီးပွငျးထနျလာနိုငျသလား၊ စဈရေးပဋိပက်ခကို ဘယျလိုငွိမျးသတျကွမလဲ၊ စဈဘေးရှောငျပွညျသူတှေ ပွနျလညျနရောခရြေးအတှကျ အစိုးရအနနေဲ့ ဘယျလိုဆောငျရှကျထားရှိပါသလဲ။
ဒီကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး ခငျြးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ရဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ စညျပငျ၊ လြှပျစဈ၊ စကျမှုလကျမှုဝနျကွီး ဦးစိုးထကျကို ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
မေး။ ။ ခုခြိနျထိ ပလကျဝဒသေမငျွိမျးခမျြးသေးတဲ့အပျေါမှာ ပလကျဝသားတဈယောကျအနနေဲ့ ဘာပွောခငျြလဲ?
ဖွေ။ ။ ကြှနျတျောတို့ဒသေက တျောလှနျရေးလညျးမလုပျဘူး၊ သူမြားတှလေုပျတဲ့တျောလှနျရေးအပျေါမှာ ဒသေခံတှေ သဆေုံး၊ ပြောကျဆုံး အမြားကွီးဖွဈတယျ။ အခုလညျးအဖမျးခံရပွီးပွနျမလှတျတဲ့သူတှေ အမြားကွီးရှိတယျ။ နောကျပွီး တော့ လူတှကေ လကျနကျကွောငျ့ ထိခိုကျဒဏျရာရတဲ့ လူသူတှပြေောကျဆုံး သှားတဲ့သူတှလေညျးအမြားကွီးရှိတယျ။ ဒီစဈပှဲတှကေ ပွညျတှငျးစဈပှဲဖွဈတာ နှဈပေါငျး ၇ဝ ကြျောသှားပွီ လကျနကျကိုငျတျောလှနျနလေို့ကတော့ဒီလိုဟာ မြိုးကပွီးမှာမဟုတျဘူး။ ငွိမျးခမျြးဖို့အတှကျ တကျညီလကျညီ ဝိုငျးတညျဆောကျမှရမှာ။ နိုငျငံတျောအပိုငျးကရော၊ တပျမတျောပိုငျးကရော၊ သူတို့ငွိမျးခမျြးရေးလုပျခငျြရငျ ငွိမျးခမျြးရေးကိုဖိတျချေါရမှာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ သူတို့လုပျတဲ့ လမျးစဉျတှအေတှကျ သူတို့ဖကျက ဆှေးနှေးဖို့အတှကျ နညျးနညျး ခကျခဲတဲ့အနထေားမှာ ဖွဈတယျ။ နိုငျငံတျောဖကျကနပွေီးတော့ တညျဆောကျလိမျ့မယျလို့ထငျတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဒသေခံ တှအေနနေဲ့ကတော့ ငွိမျးခမျြးရေးလမျးစဉျမှာ NCA လကျမှတျထိုးတဲ့လမျးစဉျထဲမှာ ပေါငျးပွီးမှ ငွိမျးခမျြးရေးလမျးစဉျထဲကိုဝငျမှ အေးခမျြးမယျလို့ထငျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ခငျြးလူထုဖွဈဖွဈ၊ ရခိုငျလူထုဖွဈဖွဈ ဒီငွိမျးခမျြးရေးလမျးစဉျထဲကို ဝငျမှအေးခမျြးသှားမယျလို့ထငျတယျ။
မေး။ ။ ပလကျဝဒသေအနနေဲ့စဈပှဲဖွဈတဲ့အတှကျ ဘယျလောကျထိ ဆုံးရှုံးနဈနှာမှုတှကွေုံနရေလဲ?
ဖွေ။ ။ စဈပှဲတှကွေောငျ့ ကြှနျတျောတို့စားဝတျနရေေးတှအေငျမတနျမှ ခကျခဲတယျ။ စဈပှဲတှကွေောငျ့ သဆေုံး၊အဖမျးခံပြောကျဆုံးတဲ့သူတှလေညျး ရှိပါတယျ။ လူ၁ဝဝကြျောလောကျ ဒီစဈပှဲကွောငျ့ ဖမျးဆီးခံရတာရှိတယျ၊ ပွနျလှတျတဲ့သူတှလေညျးရှိတယျ ၊၂ဝကြျောလောကျ ပွနျမလှတျသေးဘူး။ သဆေုံးတဲ့သူတှလေညျး ၅၀ လောကျရှိမယျဒဏျရာရတဲ့သူတှရေော အဲ့ပတျဝနျးကငျြလောကျရှိတယျ။ အဲ့ဒီအပွငျ စားဝတျနရေေးမပွလေညျပဲ ပလကျဝမှာ IDP လုပျထားတယျ။ ဆမီးမှာ IDP လုပျထားတယျ၊ မီးဇာမှာလုပျထားတယျ။ စိမျးဆငျးဝ IDP ဆိုပွီး (၄)နရောမှာလုပျထားတယျ။ အဲမှာရှိတဲ့သူတှကေ ကိုယျ့ရှာကိုပွနျခငျြကွတယျ၊ အဲ့ရှာကို ပွနျလို့မရသေးတဲ့အတှကျ လကျရှိ စဈရေးမအေးခမျြးသေးတဲ့အတှကျ ပွနျလို့မရဘူး။ ကြှနျတျောတို့ခငျြးလူမြိုးတှကေ ကိုယျ့ဒသေ၊ကိုယျ့ရှာကို ခငျတှယျမွတျနိုးတဲ့သူတှဆေိုတော့ ပွနျခငျြကွတယျ စဈရေးကွောငျ့မပွနျနိုငျကွဘူး။
မေး။ ။ ခုလကျရှိပလကျဝဘကျအခွအေနဘေယျလိုရှိလဲ၊ စဈပှဲဆကျတိုကျဖွဈနလေား?
မေး။ ။ ပလကျဝငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ ဆရာတို့ခငျြးပွညျနယျအစိုးရအနနေဲ့ ဘာတှလေုပျဆောငျဖို့ စိတျကူးထားလဲ?
ဖွေ။ ။ ကြှနျတျောတို့က လကျရှိ စဈရေးလှုပျရှားနတေဲ့စဈရေးပဋ်ဋိပက်ခတှကေို ကြှနျတျောတို့ဖကျကတော့ အမွဲတမျးအစိုးရဖကျကနဲ့ NCA လကျမှတျထိုးစခေငျြတာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ရရှေညျကွတော့ စဈရေးပဋ်ဋိပက်ခတှကေို ဘယျတော့မှ အဆုံးမသတျနိုငျကွဘူး။ စားပှဲပျေါမှာဆှေးနှေးပွီးတော့ ပွီးမဲ့ကိစ်စရပျတှဖွေဈတဲ့အတှကျ အခုလညျး နိုငျငံတျောအဆငျ့ကနငွေိမျးခမျြးရေးဖကျကို ထဲထဲဝငျဝငျ လုပျဆောငျနတေယျ၊ ပငျလုံဆှေးနှေးပှဲတှကေို လုပျနတေယျ။ အဲ့ဘောငျထဲမှာဆှေးနှေးမှ အဆငျပွမှော၊ အဲ့တာတောငျမှညှိနှိုငျးပေါငျးစပျလုပျရမဲ့အရာတှအေမြားကွီးရှိတယျ။ တိုငျးရငျးသားတှလေကျနကျကိုငျတျောလှနျခဲ့တာ နှဈပေါငျးကွာခဲ့ပွီ ဒါကအဖွမေထှကျနိုငျဘူး။ ငွိမျးခမျြးရေး စားပှဲဝိုငျးမှာဆှေးနှေးမှ ကိုယျ့ဒသေဖှံ့ဖွိုးရေး၊ ကိုယျဒသေတညျဆောကျရေးပဲဖွဈဖွဈ ပွီးစီးသှားမှာဖွဈပါတယျ။ အဲ့တာကွောငျ့ လကျနကျကိုငျဖကျကဖွဈဖွဈ၊ နိုငျငံရေးသဘောတူတဲ့ဖကျကဖိတျချေါတဲ့ ဆှေးနှေးပှဲမှာ အကုနျပါဝငျနိုငျမှ အေးခမျြးနိုငျမှာအဲ့လိုမြှျောလငျ့ပါတယျ။
မေး။ ။ စဈဘေးရှောငျဒုက်ခသညျတှကေို အစိုးရဘကျကနပွေီးတော့ ဘယျလိုထောကျပံ့တာတှေ ဆောငျရှကျနလေဲ?
ဖွေ။ ။ ခုနိုငျငံတျောအဆငျ့ကနပွေီး လူမှုဝနျထမျးနဲ့ကယျဆယျရေးဖကျကနပွေီး ထောကျပံတာတှလေညျး တောကျလြှောကျလုပျနတေယျ။ စားဝတျနရေေးအတှကျကို ထောကျပံ့ပါတယျ။ WFP ကလညျးထောကျပံ့ ပါတယျ ICRC ၊ MRCS ကလညျးစပွီးတော့ထောကျပံ့နပေါတယျ။ ပွီးတော့ ပွညျတှငျးပွညျပကရောကျတဲ့ကြှနျတျောတို့ရဲ့ မိတျဆှတှေလေညျးငှကွေေးထညျ့ဝငျပွီးတော့ အဓိက ဆနျတှေ၊ ခုရကျပိုငျးက အေးလာတော့ အဝတျအထညျတှေ အလှုခံပွီး ပို့ပေးတာတှရှေိတယျ။ ငှကွေေးနဲ့ပါဝငျတဲ့သူရှိသလို၊ ပစ်စညျးနဲ့ပါဝငျပေးတဲ့ သူတှလေညျးရှိတယျ၊ အဓိကတော့ နိုငျငံတျောကပံ့ပိုးတဲ့ဟာတှကေို အဓိကယူပွီး ဒသေခံတှလေကျထညျ့ ဆနျ၊ဆီ၊ပဲ၊ ရအောငျလုပျပေးတယျ၊ အဝတျအထညျတှေ၊ လူသုံးကုနျပစ်စညျးတှေ လုပျပေးတာပေါ့၊ IDP မှာနနေိုငျအောငျ နိုငျငံတျောကဘတျဂကျြတှေ ခပြေးတယျ။ ပွညျနယျဘတျဂတျြနဲ့လကျရှိ IDPမှာနလေို့ရအောငျ တဲတှဆေောကျပေးတယျလကျရှိက၊
မေး။ ။ စဈဘေးရှောငျတှအေတှကျ ပွနျလညျနရောခထြားရေးတှကေိုရော လုပျဆောငျသှားဖို့ရှိလား?
ဖွေ- နောငျတခြိနျ ဒီထကျပိုအေးခမျြးတဲ့အခါကွရငျ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျကလညျး ထုတျပွနျခကျြ ထုတျထားတယျ အေးခမျြးသာယာတဲ့အခါကွရငျ လိုအပျတဲ့လူမှုဒုက်ခတှအေတှကျကိုဖွရှေငျး ပေးဖို့အတှကျ အိမျယာတှေ၊လူမှုရေးအဆငျ့တနျးတဈခု လိုအပျခကျြတှကေိုဖွညျ့ဆညျးပေးမယျလို့ လမျးညှနျတာရှိပါတယျ။ ခုကမအေးခမျြးသေးတော့ ဘာမှလုပျလို့မရသေးဘူး အနအေထားဖွဈနတေယျ။ ခုကမိုးရာသီဆိုတော့ ခဏပဈခတျရပျဆဲသလို ဖွဈနပေမေယျ့ ပှငျ့လငျးရာသီဆိုရငျစိုးရိမျတယျ။ ပှငျ့လငျးရာသီဖွဈရငျစဈရေးပဋ်ဋိပက်ခတှေ ပိုပွီးတော့ဆိုးလာနိုငျတယျ။
မေး။ ။ ပလကျဝမှာ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ရခိုငျပွညျနယျမှာ ရှေးကောကျပှဲမလုပျနိုငျတဲ့ ဒသေတှမြေားတော့ ဒီဟာက အကြိုးသကျရောကျမှုရှိလာနိုငျတယျလို့ထငျလား?
ဖွေ။ ခုလညျးပဲနိုငျငံရေးအခငျးအကငျြးက ရခိုငျမွောကျဖကျခွမျးမှာလညျး ရှေးကောကျပှဲမလုပျနိုငျတာ (၇)မွို့နယျလောကျရှိတယျ။ ရှေးကောကျပှဲလုပျနိုငျတာကလဲ တဝကျလောကျပဲရှိတယျ။ ထုတျပွနျခကျြတှကေို ဖတျကွညျ့တာစိုးရိမျစရာတှဖွေဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ပလကျဝမှာပဲရှေးကောကျပှဲပဲကငျြးပခဲ့တာပါ အောငျမွငျစှာပွီးသှားပါတယျ။ ရှေးကောကျပှဲ မလုပျနိုငျတဲ့ဒသေတှမှော ရှေးကောကျပှဲပွနျလုပျဖို့ တောငျးဆိုတာနဲ့ပဋ်ဋိပက်ခအသှငျကိုဆောငျတဲ့ ဟာတှလေညျးတှရေ့တယျဒါမြိုးတှကေ ကြှနျတျောတို့ဖကျ ကစိုးရိမျစရာတှဖွေဈလာတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ NCAနဲ့လကျမှတျထိုးပွီးတော့မှ နိုငျငံတျောနဲ့ ညှိနှိုငျးပွီးဆှေးနှေးပွီးမှ အဖွရှောသငျ့တယျလို့ထငျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့လူမြိုးစုရဲ့ တျောလှနျရေးမဟုတျပဲ အခွားလူမြိုးရဲ့တျောလှနျရေးက ကြှနျတျောတို့ပလကျဝဒသေကို အငျမတနျမှ ထိခိုကျနှဈနာပါတယျ။ အဲ့အတှကျ ပညာရေး၊ ကနျြးမာရေး၊ လူမှုရေး တှကေိုဘကျပေါငျးစုံမှာ ထိခိုကျနှဈနာဆုံးရှုံးတှလေညျးအမြား ကွီးရှိပါတယျ။ မဖွဈစခေငျြပါဘူး။
မေး။ ။ နောကျလာမယျ့ အစိုးရသကျတမျးမှာ ခငျြးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့အတှကျ ဝနျကွီးခြုပျဖွဈလာနိုငျတယျလို့ ထငျကွေးပေးကွတာတဈခြို့ရှိတယျ၊ တဈကယျလို့ ဝနျကွီးခြုပျဖွဈလာခဲ့ရငျ ပလကျဝဒသေ ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ ဘာတှလေုပျဆောငျမလဲ?
ဖွေ။ ။ ပွညျသူလူထုကပဲဖွဈဖွဈ၊ အစိုးရကပဲဖွဈဖွဈ တာဝနျပေးမယျဆိုရငျ လုပျဖို့အဆငျ့သငျ့ပဲလို့ပွောခငျြပါတယျ။ ပွညျတှငျး/ပွညျပကပေးတဲ့အတှအေ့ကွုံတှေ လညျးရှိပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဒသေရဲ့ လိုအပျခကျြတှကေိုလညျး အတိုငျးအတာတဈခုအထိနားလညျပါတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈတာဝနျပေးမယျဆိုရငျ လုပျဖို့ အဆငျ့သငျ့ပဲလို့ပွောခငျြပါတယျ။ နောကျတခုက အမွငျ့ဆုံးရာထူးပဲဖွဈဖွဈ ခုလို အစိုးရအဖှဲ့ဝငျဝနျကွီးပဲဖွဈဖွဈ ဘယျနရောပဲဖွဈဖွဈကြှနျတျော တာဝနျကဖြေို့အဆငျသငျ့ပါ။ လကျရှိလညျး ပွညျနယျအတှငျးမှာ လုပျရမဲ့အရာတှကေိုခှဲခွား မှုမရှိဘူး၊ဘယျနရောပဲဖွဈဖွဈရအောငျသှားပွီးမှ လကျရှိဆောငျရှကျနတေယျ။ စဈရေးပဋ်ဋိ ပက်ခဖွဈတဲ့ဟာဆိုရငျလညျးစဈရေးဖွဈတဲ့အတှကျ သာမနျအားဖွငျ့ ဘယျသူမှ ဒီဒသေမြိုးကို သှားဖို့ခကျခဲပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ အခကျအခဲတှကွေားက ကိုယျ့ဒသေကို သှားပွီးလူတှရေဲ့လိုအပျခကျြကို ဖွညျ့ဆညျးတာ၊ နိုငျငံတျောကိုယျစား၊ ပွညျနယျအစိုးရကိုယျစား၊ နယျမွအေဖှဲ့အစညျး တှမြေိုးလုပျပေးခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ကိုယျတိုငျလညျး ပဈခတျတာကို ခံရတဲ့ထိဖွဈဖူးပါတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈဒီနရောမြိုးတှကေို့ သှားဖို့အငျမတနျမှ ခကျပါတယျ။ အဲလိုဒသေကိုလညျး ဖှံ့ဖွိုးအောငျ၊ ငွိမျးခမျြးအောငျလုပျဖို့ကလညျး အငျမတနျမှခကျခဲပါတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ အခြိနျယူပွီးမှလုပျရမဲ့အနအေထားပါပဲ။ အခြိနျယူလုပျမယျ၊ နောကျသဘောထားတှပွေောငျးအောငျ ဆှေးနှေးမယျ။ နောကျလိုအပျတဲ့ဖွညျ့ဆညျးမှုတှလေုပျပွီးမှ ပွီးသှားမဲ့ဟာတှဖွေဈပါတယျ။ တာဝနျပေးမယျဆိုရငျ မလုပျနျိုငျစရာမရှိပါဘူး။
By Benezer – ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပလက်ဝမြို့နယ်မှာ ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA) တပ်ဖွဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ခြေကုပ်ယူ လှုပ်ရှားလာတဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီး တပ်မတော်နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတာကြောင့် ပလက်ဝမြို့နယ်ဟာ စစ်တလင်းနယ်မြေဖြစ်ခဲ့ရသလို တိုက်ပွဲကြောင့် အပစ်မဲ့ပြည်သူအမြောက်အများ နေရပ်စွန်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။
တပ်မတော်နဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ဟာ ၂၀၂၀ နှစ်ဆန်းပိုင်းကစလို့ ယခင်ကထက် တိုက်ပွဲတွေ ပိုမိုပြင်းထန်လာတာကြောင့် ပလက်ဝမြို့်နယ်နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အပစ်မဲပြည်သူ သိန်းနဲ့ချီ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်ဘဝ ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်မှာဆိုရင်လည်း စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ တစ်သောင်းကျော်ဟာ စစ်ဘေးတိမ်ရှောင်နေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ပလက်ဝမြို့နယ်မှာ စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေ ပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်သလား၊ စစ်ရေးပဋိပက္ခကို ဘယ်လိုငြိမ်းသတ်ကြမလဲ၊ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေ ပြန်လည်နေရာချရေးအတွက် အစိုးရအနေနဲ့ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ထားရှိပါသလဲ။
ဒီကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ စည်ပင်၊ လျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး။ ။ ခုချိန်ထိ ပလက်ဝဒေသမငြိ်မ်းချမ်းသေးတဲ့အပေါ်မှာ ပလက်ဝသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘာပြောချင်လဲ?
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့ဒေသက တော်လှန်ရေးလည်းမလုပ်ဘူး၊ သူများတွေလုပ်တဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်မှာ ဒေသခံတွေ သေဆုံး၊ ပျောက်ဆုံး အများကြီးဖြစ်တယ်။ အခုလည်းအဖမ်းခံရပြီးပြန်မလွတ်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတယ်။ နောက်ပြီး တော့ လူတွေက လက်နက်ကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ လူသူတွေပျောက်ဆုံး သွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ ဒီစစ်ပွဲတွေက ပြည်တွင်းစစ်ပွဲဖြစ်တာ နှစ်ပေါင်း ၇ဝ ကျော်သွားပြီ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်နေလို့ကတော့ဒီလိုဟာ မျိုးကပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။ ငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက် တက်ညီလက်ညီ ဝိုင်းတည်ဆောက်မှရမှာ။ နိုင်ငံတော်အပိုင်းကရော၊ တပ်မတော်ပိုင်းကရော၊ သူတို့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ချင်ရင် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖိတ်ခေါ်ရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့လုပ်တဲ့ လမ်းစဉ်တွေအတွက် သူတို့ဖက်က ဆွေးနွေးဖို့အတွက် နည်းနည်း ခက်ခဲတဲ့အနေထားမှာ ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတော်ဖက်ကနေပြီးတော့ တည်ဆောက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဒေသခံ တွေအနေနဲ့ကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်မှာ NCA လက်မှတ်ထိုးတဲ့လမ်းစဉ်ထဲမှာ ပေါင်းပြီးမှ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ထဲကိုဝင်မှ အေးချမ်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ချင်းလူထုဖြစ်ဖြစ်၊ ရခိုင်လူထုဖြစ်ဖြစ် ဒီငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ထဲကို ဝင်မှအေးချမ်းသွားမယ်လို့ထင်တယ်။
မေး။ ။ ပလက်ဝဒေသအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်လောက်ထိ ဆုံးရှုံးနစ်နှာမှုတွေကြုံနေရလဲ?
ဖြေ။ ။ စစ်ပွဲတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့စားဝတ်နေရေးတွေအင်မတန်မှ ခက်ခဲတယ်။ စစ်ပွဲတွေကြောင့် သေဆုံး၊အဖမ်းခံပျောက်ဆုံးတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ လူ၁ဝဝကျော်လောက် ဒီစစ်ပွဲကြောင့် ဖမ်းဆီးခံရတာရှိတယ်၊ ပြန်လွတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ် ၊၂ဝကျော်လောက် ပြန်မလွတ်သေးဘူး။ သေဆုံးတဲ့သူတွေလည်း ၅၀ လောက်ရှိမယ်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေရော အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်။ အဲ့ဒီအပြင် စားဝတ်နေရေးမပြေလည်ပဲ ပလက်ဝမှာ IDP လုပ်ထားတယ်။ ဆမီးမှာ IDP လုပ်ထားတယ်၊ မီးဇာမှာလုပ်ထားတယ်။ စိမ်းဆင်းဝ IDP ဆိုပြီး (၄)နေရာမှာလုပ်ထားတယ်။ အဲမှာရှိတဲ့သူတွေက ကိုယ့်ရွာကိုပြန်ချင်ကြတယ်၊ အဲ့ရွာကို ပြန်လို့မရသေးတဲ့အတွက် လက်ရှိ စစ်ရေးမအေးချမ်းသေးတဲ့အတွက် ပြန်လို့မရဘူး။ ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေက ကိုယ့်ဒေသ၊ကိုယ့်ရွာကို ခင်တွယ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေဆိုတော့ ပြန်ချင်ကြတယ် စစ်ရေးကြောင့်မပြန်နိုင်ကြဘူး။
မေး။ ။ ခုလက်ရှိပလက်ဝဘက်အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ၊ စစ်ပွဲဆက်တိုက်ဖြစ်နေလား?
ဖြေ။ ။ မိုးတွင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက် ငြိမ်နေပေမယ့် အေအေတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြည့်တဲ့အခါ သူတို့လိုချင်တာမဖြစ်တဲ့အတွက် ခုရွေးကောက်ပွဲဆိုရင် သူတို့ဒေသမှာ မဖြစ်တာတော်တော်များတယ်။ တကယ်လို့သူတို့တောင်းဆိုတာ မဖြစ်လာဘူးဆိုရင် စစ်ရေးပဋ္ဋဋိပက္ခ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ခုပွင့်လင်းရာသီလည်း ရောက်လာပြီဆိုတော့ပိုဖြစ်လာနိုင်တယ် အဲ့လိုဆိုရင် လူထုကဒုက္ခရောက်လာနိုင်တယ်။ အဲ့လိုဖြစ်မဲ့အစား ငြိမ်းချမ်းတဲ့စကားဝိုင်းထဲမှာရောက်ပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့အရာကို ဖော်ဆောင်သင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေကမျှော်လင့်တာပေါ့၊
မေး။ ။ ပလက်ဝငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆရာတို့ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ ဘာတွေလုပ်ဆောင်ဖို့ စိတ်ကူးထားလဲ?
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့က လက်ရှိ စစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ရေးပဋ္ဋဋိပက္ခတွေကို ကျွန်တော်တို့ဖက်ကတော့ အမြဲတမ်းအစိုးရဖက်ကနဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးစေချင်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့်ရေရှည်ကြတော့ စစ်ရေးပဋ္ဋဋိပက္ခတွေကို ဘယ်တော့မှ အဆုံးမသတ်နိုင်ကြဘူး။ စားပွဲပေါ်မှာဆွေးနွေးပြီးတော့ ပြီးမဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလည်း နိုင်ငံတော်အဆင့်ကနေငြိမ်းချမ်းရေးဖက်ကို ထဲထဲဝင်ဝင် လုပ်ဆောင်နေတယ်၊ ပင်လုံဆွေးနွေးပွဲတွေကို လုပ်နေတယ်။ အဲ့ဘောင်ထဲမှာဆွေးနွေးမှ အဆင်ပြေမှာ၊ အဲ့တာတောင်မှညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်လုပ်ရမဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းကြာခဲ့ပြီ ဒါကအဖြေမထွက်နိုင်ဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေး စားပွဲဝိုင်းမှာဆွေးနွေးမှ ကိုယ့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ကိုယ်ဒေသတည်ဆောက်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ် ပြီးစီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် လက်နက်ကိုင်ဖက်ကဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံရေးသဘောတူတဲ့ဖက်ကဖိတ်ခေါ်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ အကုန်ပါဝင်နိုင်မှ အေးချမ်းနိုင်မှာအဲ့လိုမျှော်လင့်ပါတယ်။
မေး။ ။ စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေကို အစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ ဘယ်လိုထောက်ပံ့တာတွေ ဆောင်ရွက်နေလဲ?
ဖြေ။ ။ ခုနိုင်ငံတော်အဆင့်ကနေပြီး လူမှုဝန်ထမ်းနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖက်ကနေပြီး ထောက်ပံတာတွေလည်း တောက်လျှောက်လုပ်နေတယ်။ စားဝတ်နေရေးအတွက်ကို ထောက်ပံ့ပါတယ်။ WFP ကလည်းထောက်ပံ့ ပါတယ် ICRC ၊ MRCS ကလည်းစပြီးတော့ထောက်ပံ့နေပါတယ်။ ပြီးတော့ ပြည်တွင်းပြည်ပကရောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေလည်းငွေကြေးထည့်ဝင်ပြီးတော့ အဓိက ဆန်တွေ၊ ခုရက်ပိုင်းက အေးလာတော့ အဝတ်အထည်တွေ အလှုခံပြီး ပို့ပေးတာတွေရှိတယ်။ ငွေကြေးနဲ့ပါဝင်တဲ့သူရှိသလို၊ ပစ္စည်းနဲ့ပါဝင်ပေးတဲ့ သူတွေလည်းရှိတယ်၊ အဓိကတော့ နိုင်ငံတော်ကပံ့ပိုးတဲ့ဟာတွေကို အဓိကယူပြီး ဒေသခံတွေလက်ထည့် ဆန်၊ဆီ၊ပဲ၊ ရအောင်လုပ်ပေးတယ်၊ အဝတ်အထည်တွေ၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေ လုပ်ပေးတာပေါ့၊ IDP မှာနေနိုင်အောင် နိုင်ငံတော်ကဘတ်ဂျက်တွေ ချပေးတယ်။ ပြည်နယ်ဘတ်ဂျတ်နဲ့လက်ရှိ IDPမှာနေလို့ရအောင် တဲတွေဆောက်ပေးတယ်လက်ရှိက၊
မေး။ ။ စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက် ပြန်လည်နေရာချထားရေးတွေကိုရော လုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိလား?
ဖြေ- နောင်တချိန် ဒီထက်ပိုအေးချမ်းတဲ့အခါကြရင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း ထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်ထားတယ် အေးချမ်းသာယာတဲ့အခါကြရင် လိုအပ်တဲ့လူမှုဒုက္ခတွေအတွက်ကိုဖြေရှင်း ပေးဖို့အတွက် အိမ်ယာတွေ၊လူမှုရေးအဆင့်တန်းတစ်ခု လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့ လမ်းညွှန်တာရှိပါတယ်။ ခုကမအေးချမ်းသေးတော့ ဘာမှလုပ်လို့မရသေးဘူး အနေအထားဖြစ်နေတယ်။ ခုကမိုးရာသီဆိုတော့ ခဏပစ်ခတ်ရပ်ဆဲသလို ဖြစ်နေပေမယ့် ပွင့်လင်းရာသီဆိုရင်စိုးရိမ်တယ်။ ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်ရင်စစ်ရေးပဋ္ဋဋိပက္ခတွေ ပိုပြီးတော့ဆိုးလာနိုင်တယ်။
မေး။ ။ ပလက်ဝမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်တဲ့ ဒေသတွေများတော့ ဒီဟာက အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့ထင်လား?
ဖြေ။ ခုလည်းပဲနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းက ရခိုင်မြောက်ဖက်ခြမ်းမှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်တာ (၇)မြို့နယ်လောက်ရှိတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်တာကလဲ တဝက်လောက်ပဲရှိတယ်။ ထုတ်ပြန်ချက်တွေကို ဖတ်ကြည့်တာစိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပလက်ဝမှာပဲရွေးကောက်ပွဲပဲကျင်းပခဲ့တာပါ အောင်မြင်စွာပြီးသွားပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ဖို့ တောင်းဆိုတာနဲ့ပဋ္ဋဋိပက္ခအသွင်ကိုဆောင်တဲ့ ဟာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဒါမျိုးတွေက ကျွန်တော်တို့ဖက် ကစိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်လာတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် NCAနဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှ နိုင်ငံတော်နဲ့ ညှိနှိုင်းပြီးဆွေးနွေးပြီးမှ အဖြေရှာသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုရဲ့ တော်လှန်ရေးမဟုတ်ပဲ အခြားလူမျိုးရဲ့တော်လှန်ရေးက ကျွန်တော်တို့ပလက်ဝဒေသကို အင်မတန်မှ ထိခိုက်နှစ်နာပါတယ်။ အဲ့အတွက် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး တွေကိုဘက်ပေါင်းစုံမှာ ထိခိုက်နှစ်နာဆုံးရှုံးတွေလည်းအများ ကြီးရှိပါတယ်။ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။
မေး။ ။ နောက်လာမယ့် အစိုးရသက်တမ်းမှာ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အတွက် ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ထင်ကြေးပေးကြတာတစ်ချို့ရှိတယ်၊ တစ်ကယ်လို့ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ရင် ပလက်ဝဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဘာတွေလုပ်ဆောင်မလဲ?
ဖြေ။ ။ ပြည်သူလူထုကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အစိုးရကပဲဖြစ်ဖြစ် တာဝန်ပေးမယ်ဆိုရင် လုပ်ဖို့အဆင့်သင့်ပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်း/ပြည်ပကပေးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေ လည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဒေသရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိနားလည်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ပေးမယ်ဆိုရင် လုပ်ဖို့ အဆင့်သင့်ပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်။ နောက်တခုက အမြင့်ဆုံးရာထူးပဲဖြစ်ဖြစ် ခုလို အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် တာဝန်ကျေဖို့အဆင်သင့်ပါ။ လက်ရှိလည်း ပြည်နယ်အတွင်းမှာ လုပ်ရမဲ့အရာတွေကိုခွဲခြား မှုမရှိဘူး၊ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်သွားပြီးမှ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတယ်။ စစ်ရေးပဋ္ဋဋိ ပက္ခဖြစ်တဲ့ဟာဆိုရင်လည်းစစ်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက် သာမန်အားဖြင့် ဘယ်သူမှ ဒီဒေသမျိုးကို သွားဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အခက်အခဲတွေကြားက ကိုယ့်ဒေသကို သွားပြီးလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းတာ၊ နိုင်ငံတော်ကိုယ်စား၊ ပြည်နယ်အစိုးရကိုယ်စား၊ နယ်မြေအဖွဲ့အစည်း တွေမျိုးလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း ပစ်ခတ်တာကို ခံရတဲ့ထိဖြစ်ဖူးပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမျိုးတွေကို့ သွားဖို့အင်မတန်မှ ခက်ပါတယ်။ အဲလိုဒေသကိုလည်း ဖွံ့ဖြိုးအောင်၊ ငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ဖို့ကလည်း အင်မတန်မှခက်ခဲပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်ယူပြီးမှလုပ်ရမဲ့အနေအထားပါပဲ။ အချိန်ယူလုပ်မယ်၊ နောက်သဘောထားတွေပြောင်းအောင် ဆွေးနွေးမယ်။ နောက်လိုအပ်တဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုတွေလုပ်ပြီးမှ ပြီးသွားမဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်။ တာဝန်ပေးမယ်ဆိုရင် မလုပ်နိုင်စရာမရှိပါဘူး။